ရှားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ.. အဲဒါကတော့တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ပါပဲ..ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာကတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို သူများမြို့ များနဲ့မတူ ထူးထူးရှားရှားလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီစာကိုဖတ်တဲ့လူတိုင်းကြားဖူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်. တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်မီးပုံပျံပွဲတော်ကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့မြို့လေးရဲ့ရိုးရာပွဲလေးပေါ့ဗျာ.. သီတင်းကျွတ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအခြားဘာမှစိတ်ဝင်စားမူမရှိတော့ပါ ဘူး..တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံပျံပွဲအတွက်တာစူနေကြပြီလေ… ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသွား တဲ့သူမရှိ..အလုပ်တွေမှာလဲ အလုပ်သမားတွေမရှိနဲ့ အတော်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာပွဲ တစ်ခုလေးတစ်ခုပါ…အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ သိသိမသိသိအားလုံးဟာညီအစ်ကိုမောင်နှမစိတ်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြီးပွဲတော်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာလည်းကိုယ်စီ အဖွဲ့ကိုယ်စီနဲ့ အလှမီးပုံပျံတွေလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ လူကြီးပိုင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ အခေါ်မီးကျည်လို့ခေါ်တဲ့ မီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ မီးပုံးပျံကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်..နောက်တစ်ခုရှိ သေးတယ်ဗျ.. စိန်နားပန်လို့ခေါ်တယ်အလှမီးပုံပျံပါပဲ…. သူကတော့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြိုက်ပေါ့ဗျာ.သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာလေးတွေကို မီးပုံပျံရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာချိတ်ပြီးလွတ်တင်ရတဲ့ အမျိုးအစားပေါ့ဗျာ…ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သားအများစုကတော့ မီးကျည်လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးအစားကိုပိုသဘောကျကြတယ်။သူကစိတ်ဝင်စားစရာအရမ်းကောင်းသလို အန္တရယ် လည်းအရမ်းများတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာပွဲလေးကိုပြန်မရောက်ဖြစ်တာအတော့်ကို ကြာနေပါပြီဗျာ.. ဒါကြောင့်မို့ဒီလို ရေးလိုက်ရတာပါ…
Posted by တောင်ပေါ်သား at 6:52 AM | Labels: All, ကျနော်မြို့လေး